नयाँ वर्ष - सबै प्रदान एक छुट्टी: वयस्क र बच्चाहरु दुवै। हामी सबै यो रात निपुण सपना र चाहना पूरा छ भन्ने विश्वास गर्छन्। सबै अर्को वर्ष ठूलो रात कसरी खर्च गर्न, र यो त हुनेछ। र त हामी सबै लामो अघि बिदाको को coveted मिति लागि तयार सुरु: नोटिस कसलाई र के दिन गर्न, कसरी र कोसँग म नयाँ वर्ष मनाउन चाहनुहुन्छ सोच्न, योजना परिदृश्य।
आज, जवान मान्छे उत्सव रात रुचि परिवार र घर को सर्कलमा छैन खर्च भएको थियो, तर कहीं घर बाहिर। उदाहरणका लागि, नयाँ वर्ष गर्न पूर्वसन्ध्या मा आयोजित थियो मास्को रेस्टुरेन्ट , देश घरमा कहीं। गरेको नयाँ वर्षको छुट्टी मनाउन कहाँ राम्रो छलफल गरौं?
नयाँ वर्ष एक रेस्टुरेन्ट मा
हो, नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या रेस्टुरेन्ट मा - यो विचार धेरै अपिल छ। पहिले, यो एक उत्सव तालिका तयार गर्न आवश्यक छैन छ, र पर्वहरू पछि - सफा कोठा, असंख्य माझ र प्रतीक्षा, र अतिथि एक्लै तपाईं छोड्न निर्णय गर्दा। दोश्रो, छुट्टी लागि रेस्टुरेन्ट मा सामान्यतया विभिन्न प्रतियोगिताहरु भएको मनोरञ्जन कार्यक्रम तयार छ। त्यहाँ नरमाइलो गरिनेछ। तेस्रो, मनोरञ्जन प्रतिष्ठानबाट मा, तर तपाईं मानिसहरूको ठूलो संख्या मनाउन हुनेछ। एक पक्ष, तपाईं नयाँ परिचितहरू बनाउन र उदाहरणका लागि, सोख साथीहरूको पाउन सक्नुहुन्छ।
सकारात्मक पक्षहरू कुरा नयाँ वर्ष उत्सव रेस्टुरेन्ट मा, यो टार को एक चम्चा थप्दा लायक छ। जो मजा कि नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या जसरी तपाईं सुत्न र शान्ति मा आराम गर्न चाहन्छु, रेस्टुरेन्ट कर्मचारी द्वारा आयोजित थिएन निश्चित हुनुहोस्। तपाईं घर छोडेर आफ्ना पाहुनाहरूलाई कुनै पनि समस्या बिना फिर्ता कोठा रिटायर। र आफ्नो अभाव कुनै एक नोटिस हुनेछ। रेस्टुरेन्ट (तपाईं धेरै हल्ला र हँसिलो कम्पनी आफूलाई फेला विशेष गरी यदि) गर्न व्यवस्थापन भएन। साथै (र यो अर्को नकारात्मक पक्ष छ) मा अझै पनि नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या भन्दा हुनेछ र तपाईंले बिहान तरिका आफ्नो घरमा प्राप्त हुनेछ। मलाई विश्वास छ, पत्ता लगाउन जनवरी 1 चालक संग निःशुल्क परिवहन धेरै गाह्रो छ।
देश घरमा एक छुट्टी
तपाईं देश घरमा नयाँ वर्ष छुट्टी पाउनेछन् निश्चित हुनुहोस्। तपाईं कुनै पनि छैन भने पनि सजिलै (तर अग्रिम) नयाँ वर्ष को लागि, तपाईं एक घर मनपर्ने भाडामा सक्छन्।
र त्यहाँ - expanse। मा संगीत बारी र एक डिस्को एक पक्ष छ - तपाईं चाहनुहुन्छ। नृत्य को थकित प्राप्त, तपाईं यार्ड जान सक्छ र रूख वरिपरि नृत्य सार्न सक्छ, आतिशबाजी व्यवस्था, snowballs प्ले वा हिममानब बनाउने। पनि खुला आगो मा एक shish Kebab वास्तविक छ तलना!
यो नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या आफ्नो स्मृति मा सुखद भावना धेरै छोड्न हुनेछ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या लागि अर्को आकर्षक विकल्प - एउटा यात्रा। जहाँ तपाईं जान कुरा छैन चाहनुहुन्छ, र बिल्कुल कुनै कुरा छैन, तपाईं हिउँदमा रहन वा गर्मी मा ले चयन गर्न चाहन्छु। अधिक महत्वपूर्ण कुरा, दृश्यहरु को परिवर्तन र सामान्य परिदृश्य परिवर्तन सधैं नयाँ वर्ष को सुखद आश्चर्य भरिएको छ। र यो नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या पनि, तपाईं प्रेम छौँ।
रूपमा, विचार को धेरै देख्न सक्छौं। र केवल आफ्नो नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या कसरी आयोजित गरिनेछ, तपाईं मा निर्भर गर्दछ। रमाइलो र सुखद क्षण को पूर्ण राख्न!
कसरी आफ्नो हातमा मार्च 8 मा एक रचनात्मक उपहार बनाउने?
फेब्रुअरी 23 मा - fatherland दिन को डिफेन्डर। फेब्रुअरी 23 को लागि उपहार। भोजमा फेब्रुअरी 23
चिसो पानी र तातो पानी को लागि polypropylene पाइप: एक निर्माता, diameters, GOST
छैन एक इयरफोन र कसरी यो किन ठीक गर्छ?
यात्रा इन्ड्युरो। लामो दूरी यात्रा को लागि सबै भन्दा राम्रो मोटरसाइकिल
भियतनाम, नाधा ट्राग: आकर्षण (तस्बिरहरू)
भिडियो कसरी कटौती गर्ने?